Musharaxa Madaxweyne Xigeenka Waddani Oo Si Badheedh ah U Fadeexadeeyay Magaaladda Wajaale | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Tog-wajaale (SDWO): Musharaxa jagadda madxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaridka ah ee Waddani Ambassador Maxamed Cali, ayaa sifo gef iyo meel ka dhac ku ah ka bixiyay magaaladda Tog-wajaale, isla markaana aan u qalmin.
Isagoona ku tilmaamay in ay weligeedba caan ku ahayd Ey aad u fara badan oo ku nool iyo cayayaanka loo yaqaano Takfidda, inkastoo ay magaallo ahaan balaadhatayna aanay weli waxba iska bedelin xaalada uu ku sifeeyay.
Musharaxa madaxweyne xigeenka Waddani, waxa uu sidan ka sheegay xili uu hadal u jeediyanayay boqolaal dadweynaha reer Wajaale ah, mar dhawaan xisbigoodu booqasho ku tegay gobolladda galbeedka.
Waxaanu sheegay in wakhtigii ciyaalnimadiisii uu Wajaale ku yaqaanay oo ay caan ku ahayd Ey fara badan oo magaaladda ku nool iyo in marka uu roobku ku da’o lagu Siblado, xiliga aanu roobku jirina Siigadu dadka qaado.
Sidoo kale musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Waddani ayaa intaas ku daray in waxyaabaha uu Wajaale ku xasuusto ay ka mid tahay cayayaanka Tagfida loo yaqaano oo aan laga seexan Karin.
Geesta kale hadalkan Maxamed Cali, oo isagoo muuqaal ah lagu baahiyay baraha bulshadda ayay dadweynuhu aad ula yaabeen waxa ku kelifay in masuulkani uu sidan u caayo, una ceebeeyo magaaladda Tog-wajaale.
Waxaana aragtiyo kala duwan looga bixiyay, si weyna loola yaabay sababta ku kaliftay masuulkani in uu erayadan xajiinta iyo ceebaynta ah uu Wajaale ku sifeeyo, taasoo loo turjuman karro in aanu xisbigoodda Waddani wax cod ah ka filanaynin Wajaale marka doorashadda la gaadho.
Iyadoona dadka qaarkood ay ku macneeyeen in hadalka musharaxa ay ka muuqato caqli xumaan ama in uu ka xun yahay kalana masuugay magaaladda Wajaale horumarka iyo koboco dhaqaale ee ay ku talabsatay.
Sidoo kale dadweynihii muuqaalkan daawaday ayaa ku tilmaamay hadalka Maxamed Cali, mid uu ula badheedhay bulshadda iyo magaaladda Wajaale hadaladan canbaarta iyo fadeexadda ah.
Waxa kaloo uu si cad u dafiray masuulkani si baaxadda leh ee ay magaaladda Wajaale u balaadhatay, dhaqaale ahaan, ganacsi ahaa iyo magaallo ahaanba.